किन बढ्दैछ अपराध ?
सोमबार, माघ १०, २०७८ प्रबिन गिरी
बढिरहेको अपराधको ब्याख्या गर्नुभन्दा पहिला अपराध के हो ? आपराधिक गतिविधिहरु कसरी घट्ने गर्दछ भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
समष्टिगत रुपमा अपराध भन्नाले मानवको गलत क्रियाकलापलाई जनाउँदछ । कुनै पनि व्यक्ति स्वयंको मस्तिष्क वा समाजका कारण अपराधी हुन पुग्दछ । अपराधलाई परिभाषित गर्न निकै कठिन कार्य हो । समयसापेक्ष विविधता आउने गर्दछ, समाजमा दिएको चेतना र त्यही चेतनाको शक्तिले गर्दा नै व्यक्ति र व्यवहार बीचको महत्वपूर्ण अन्तर देखा पर्न सक्दछ । कुनै समय मानवीय कार्य अपराध हुन सक्छ भने कुनै समयमा सामान्य कार्य हुने गर्दछ । त्यसैका कारण अपराधलाई परिभाषित गर्नु जटिल कार्य हो ।
अपराध मानवको मस्तिष्कबाट निस्किने त्यस्तो परिणाम हो जो राज्य शक्तिले रोक्न चाहन्छ । अपराध समाज बिपरित कार्य हो । अपराध के हो भन्ने प्रश्नमा परिभाषा दिन निकै जटिल छ । विभिन्न कानुनविद्हरुको विभिन्न परिभाषा रहेको पाइन्छ ।
कानुनविद् Blackstone ले अपराधलाई दुई तरिकाबाट परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार पहिलो "अपराध सार्वजनिक कानुनको विपरीत उक्त कानुनले गर्नु भनेको काम नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नु नै अपराध हो ।"
(Crime is an act committed or omitted in violation of public law for bidding or commanding it.)
उनको दोस्रो परिभाषा अनुसार "समुच्च समुदायलाई समुदाय मानिएकामा उक्त समुदायप्रतिको सार्वजनिक अधिकार तथा कर्तव्यको उल्लंघन नै अपराध हो ।"
(A crime isaviolation of rights and duties due totge whole community, considered as community. )
नेपाली समाजमा अपराध किन बढिरहेको छ ?
अपराध समाजमा किन बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला कारण पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ ।
अभिभावकको लापरबाहीले गर्दा आपराधिक घटनाहरु घट्ने गर्दछ ।
समाजमा भय डर नभएको, अपराध गरिसकेपछि म नै राजा मेरो नै साम्राज्य भन्ने भाव राख्नुको कारण नै अपराध बढ्ने गर्दछ ।
शिक्षाको पहुँच हुन नसक्दा हाल २०७२ को संविधानले शिक्षाको पहुँच दिएता पनि सर्वहारा बर्ग समक्ष शिक्षा नपुग्दा बालबालिका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गर्दछन् ।
मानव अपराधी हुँदैन, मानवको शरीर अपराधी हुँदैन, केवल मस्तिष्क बाहेक, मानवको अन्य शरीर भनेको यन्त्र हो-जो काम गर्दा काम लाग्ने गर्दछ तर मानवको मस्तिष्क अपराधी हुने गर्दछ ।
अपराधलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?
अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो छैन । अझै पनि हजारौं अपराधीहरु हाम्रो वरिपरि खुलेआम घुमिरहेका छन् । कारण के त ? राजनीतिक हस्तक्षेप, रुपैयाँको चालबाजी, सरोकारवालाको मिलेमतो यो नै मुख्य तत्त्वहरु हुन्, अपराध न्यूनीकरण हुन नसक्नुका पछाडि ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यबस्थापिका राज्यका छुट्टाछुट्टै अंगहरु र काम भएझै अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न कठोर व्यवस्था हुनुपर्दछ ताकि कसैको पनि हस्तक्षेपको पहुँच नपुगोस् ।
हाल सुर्खेतमा कानुन बिषय (BA.LLB) अध्ययनरत
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८, १९:४३:००
अल्मलिएको पात्र र बिकृत प्रबृत्तिको हौवा
नारीहरु पुरुष सरह स्वतन्त्र हुन जरुरी छ
बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापले विकृत बन्दैछ समाज